Wholesale Pepa muvharo Mugadziri uye Mutengesi | Futur
Pepa Kofi Mukombe
Kaviri Wall Wall Cup
CPLA Kofi Mukombe muvharo
Bagasse Kofi Mukombe muvharo
Pepa Mukombe zvishongedzo
Pulp Mukombe Mutakuri
Pepa Mukombe Sleeve
Wooden Kofi Inokurudzira
Cpla Kofi Spoon
Wooden Kofi Spoon
Supu Pepa Bowl
Ice Cream Kuenda
Ice Cream Pepa Mukombe
Ice Cream Mukombe muvharo
Rectangular Pepa Bowl
CPLA Rectangular muvharo
PET Rectangular muvharo
PP Rectangular muvharo
Wide Pepa Bowl
Bvisa PLA Chivharo
Round Pepa Pail
Chikafu Midziyo Ine Pla Window
Pepa Baguette Bhokisi
Clasp Clip Pepa Baguette Kuputira Pack
Catering Bhokisi Yakavharwa
Kutenderera Bagasse Bowl
Yakaenzana Bagasse Bowl
Square CPLA muvharo
Yakaenzana PET Chivharo
Square PP muvharo
Bagasse Kudya Kwemanheru
Bagasse Chikafu Tereyi
Bagasse Chikamu Chikamu
Pepa Chikamu Chikamu
Inorema Duty Cpla Kucheka
Pakati Pakati Kurema Cpla Kucheka
Forogo, Banga Nechipunu Kit
Wooden Forogo, Banga Nechipunu Kit
Tamper Rinoratidza Sticker
MAP & NEMAHARA Mapepa ekurongedza
Wepakati Kurema CPLA Kucheka
Fl-PL115PLA 115mm Bepa Muvharo Inokodzera 8 / 10oz Paper Bowls 500 (20 * 25pcs)
Fl-PL150PLA 150mm Pepa muvharo Inokodzera 16/20/24 / 32oz Paper Bowls 360 (6 * 60pcs)
Fl-PL184PLA 184mm Pepa muvharo Inokodzera 26/30 / 40oz Mapepa Mabhegi 200 (4 * 50pcs)
Flat chivharo chepepa. Midziyo yeFUTUR yakasarudzika musanganiswa & mutambo wehurefu wekupedzisira mune dhizaini uye kuita kwakawanda. A panoramic maonero eako foodie mafuta. Chivharo chekuvhara chikafu chinopisa kuenda. Sustainable board ine chirimwa-chakavakirwa PLA lining. Yakagadzirwa kubva kumiti. Zvekutengeserana zvine manyowa uko zvinogamuchirwa.
Muvharo bepa yakagadzirwa kubva pabepa risingazivikanwe uye akafukidzwa ne PLA bioplastic inogadzirwa kubva kuzvirimwa, kwete mafuta. Mahwendefa emapepa akafukidzwa neiyo bioplastic lining yakagadzirwa kubva kumiti, kwete mafuta. Ivo akakodzera kune inopisa uye inotonhora chikafu uye zvinwiwa. Certified maindasitiri compostable.
Yakawanda inoraswa zvivharo zvakagadzirwa nepurasitiki. It kazhinji zvinotora makore mazana maviri kuti ikanganise zvakasikwa. Iyo inoparadza iyo nzvimbo uye yakaoma kuzvidzikisira pachayo mushure mekurasa, zvichikonzera matambudziko enguva refu ezvakatipoteredza.Kugadzira yedu chivharo chepepas zvinoguma 80% mashoma magasi ekupisa moto pane epurasitiki yakajairwa.
Isu tinoshandisa rinorema-basa, premium mhando bhodhi ichipa yedu bepa zvivharo kugadzikana kwepamusoro, chivharo chiri nani uye kuputira. Bepa redu chivharo inoenderana maererano neyedu pepa mbiya saizi, inokodzera yedu yese sopu bepa mbiya & yakafara bepa mbiya.
Ivo akakodzera kune ese anopisa uye anotonhora mbiya uye ine sosi-yakachengeteka imwe nharaunda ine hushamwari imwe nzira kune yakajairwa chivharo chepurasitiki.
Yakadhindwa uchishandisa eco-inoshamwaridzika soy-yakavakirwa kana emvura-based inks. Iyi mbiya inogadzikana munzvimbo yekutengesa.
Dhizaini inobata maziso muruoko rwemutengi inogara ichionekwa nevamwe. Inowanikwa mune yakawanda indasitiri yakaenzana saizi, edu mapepa mabheji anogona kuve etsika-akadhindwa kusimudzira yako mhando.
· Saizi dzakasiyana siyana kubva ku115mm & 150mm & 184mm, Inokodzera FUTUR yakafara bepa mbiya.
· Mabhodhoro emapepa akavharika uye anoshandiswazve.
Tsika dhizaini & kudhinda kunowanikwa kuratidza yako mhando.
· Kraft Mapepa
· White Pabhodhi
· Bamboo Mapepa ebhodhi
· Pe liner-Inogadziriswazve
· Plastiki Yemahara-inogadzikana
Pashure: PET Chivharo
Zvadaro: Round Pepa Pail
Biodegradable Pepa muvharo
compostable bepa muvharo
eco inovhara muvharo
Eco Mapepa Lids
bepa mbiya muvharo
PLA lining bepa muvharo
PLA bepa muvharo
inogadziriswazve pepa chivharo
saladhi bepa mbiya muvharo
chivharo chinogara chiripo
yakagadzikana bepa muvharo
yakafara bepa mbiya muvharo